धनौजी गाउँपालिकाका यी वडाध्यक्षले आफ्नै श्रीमतिलाई अध्यक्ष बनाएर लाखौँ लुटे
आज : वि.सं २०७८ कार्तिक ११ बिहीबार
#डा. सिके राउत
यसका साथै, मस्जिदको नाममा २० लाख रुपैयाँ बिना कामकै रकम निकासा गरेका छन् ।
२०७८ असोज २४ आइतबार
बेलुकी ७:३४ बजे
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । दक्षिणी धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका एक वडाध्यक्षले आफ्नै श्रीमतिलाई समितिको अध्यक्ष बनाएर लाखौ रुपैयाँ निकासा गरेका छन् ।
आईतबार योजना र नीति विपरित कार्य गरेको भन्दै स्थानीयहरुले धनुषाको धनौजी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को वडा कार्यालमा तालाबन्दी गरेको हो । सोही क्रममा प्रदर्शनकारीहरुले धनौजी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष कलिम साफीले योजना विपरित कार्य गरी लाखौँ रुपैयाँ झ्वाम्म पारेका छन् ।
भडरियास्थित रहेको वडा कार्यालयमा तालबन्दी गर्दै स्थानीयहरुले आर्थिक बर्षमा विभिन्न योजनाहरुमा कामै नगरी लाखौ रुपैयाँको निकासा गरेको आरोप लगाएको हो । विभिन्न शिर्षकको रकम कामै नगरी निकासा गरेको बताइएको छ ।
वडाध्यक्ष साफीले केही महिनाअघि मात्र आफ्नो घरमा लगेको वडा कार्यालयको ४ बर्षको भाडा असुलेका छन् । “उनले केही महिनाअघि मात्र आफ्नो घरमा वडा कार्यालय सारेका छन् । यसअघि त साढे ३ बर्षदेखि कार्यालय नै थिएनन् । गाउँपालिकाकै कार्यालयमा काम हुन्थ्यो । तर, ४ बर्षको घर भाडा भनेर रकम लिएका छन् ।”– एक स्थानीयले बताए ।
वडाध्यक्ष साफीले भडरियास्थित रहेको गणेश मन्दिर नजिकै माटो पुर्ने कार्य योजना र कागजमै सिमित राखेर रकम निकासा गरिलिएका छन् । यसका साथै, वडास्तरीय चापाकल (कल) वितरणको नाममा समेत २० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । सोही कल वितरण नै नगरी सँस्थाको नामबाट आफ्नै छोरालाई सबै चापाकल दिएर विक्री गरेको आरोप समेत लगाएको छ ।
यसका साथै, मस्जिदको नाममा २० लाख रुपैयाँ बिना कामकै रकम निकासा गरेका छन् । मस्जिदको छत मात्र ढलान गरी कुल कार्य देखाएर सबै रकम झिकेका छन् । सोही मस्जिद निर्माणको लागि वडाध्यक्ष साफीले आफ्नै श्रीमतिलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर सबै रकम झवाम्म पारेको आरोप स्थानीयहरुले लगाएका छन् ।
साफीले भैरब स्थानमा कामै नगरि ४ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको पाइएको छ । धनौजी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ तरही टोलको १० लाख रुपैयाँको बजेट अर्कै स्थानीय तह (विदेह नगरपालिका) को वडा नम्बर ९ मा मस्जिद बनाउन खर्च गरेको आरोप समेत स्थानीयहरुले लगाएका छन् ।
वडाध्यक्ष साफीले तरकारी खेतीको नाममा गाउँपालिबाट वितरण गरिने भनिएको बिउ बिजनको नाममा किसानको समेत १ लाख रुपैयाँ खाएको आरोप लगाइएको छ । स्थानीय एक क्लबको फर्निचरको नाममा पनि एक लाख रुपैयाँ निकासा गरेको आरोप छ । निकासा गरेपनि न किसानले नत क्लबले नै कुनै समान प्राप्त गरेको छ ।
लामा नङ पालेर मधेशको नाम उच्च पार्छु : यादव
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर-२ को अस्थायी राजधानी जनकपुरका एक युवकले आफ्नो नँग (नौह) बाट पहिचान स्थापित गर्ने धोको राखेका छन् । जनकपुरधाम उपमहागनरपालिका वडा नं. १७ कनकपट्टि बस्ने दिनेश
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर-२ को अस्थायी राजधानी जनकपुरका एक युवकले आफ्नो नँग (नौह) बाट पहिचान स्थापित गर्ने धोको राखेका छन् ।
जनकपुरधाम उपमहागनरपालिका वडा नं. १७ कनकपट्टि बस्ने दिनेश सिंह यादवले लामा नङ पालेर विश्वमै देश र मधेशको नाम उच्च पार्ने धोको राखेका हुन। सो धोकोलाई साकार पार्न उनले विगत १० वर्षदेखि नङ पाल्दै आईरहेका छन् ।
लामा नङ पाल्नेमा आफू नेपालमै पहिलो व्यक्ति भएको दाबी गर्ने उनको हातको औलाको नङ ७, ९ र १० इन्च गरी ४० इन्चको भइसकेको छ । विदेशमा काम गर्ने केही कनकपट्टीवासीले नङका बारेमा प्रचारप्रसार गर्दा केही युएसए र जापानवासीले उहाँलाई नङको संरक्षणका लागि आर्थिक सहयोग पनि गरिरहेका छन् ।
देश, प्रदेश र स्थनीय सरकारबाट कुनै पनि सहयोग प्राप्त नभएको यादवलाई नङ पालेर विश्व रेकर्ड कायम गर्नका लागि युएसए र जापानवासीले मासिक रु १५ हजार रकम सहयोग गरिरहेको छ ।
विदेशमा कार्य गर्ने गाउँवासीको प्रचारप्रसारका कारण चार वर्षअघि दुवै देश नागरिकले आफूसँग जनकपुरमा भेट गरी आर्थिकरूपले सहयोग गर्ने क्रम शुरू गरेको उनी बताउँछन् ।
जाडोयाममा सिरक ओढ्ने क्रममा नङको रक्षामा समस्या हुने गरेको बताउँदै यादव भन्छन्, “देश र मधेशको नाम उच्च पार्न जस्तोसुकै समस्यासँग लड्न तयार छु ।” स्थानीय सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा लेखापाल पदमा कार्यरत यादव विदेशी नागरिकले नङ संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि गरेको सहयोग रकमले नङको संरक्षण कार्यसँगै बचत पनि गरेका छन् ।
यादव भन्छन्, “नङ संरक्षणका लागि सहयोगीबाट प्राप्त रकममध्ये मासिक रु ५०० खर्च हुने गरेको र बाँकी रकम भविष्यलाई ध्यानमा राखी बैंक जम्मा गर्दा हाल चार लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।”
डा. सिके राउतको पहिचान मैले दिएको छु, उ पागल छ : पूर्व राज्यमन्त्री मण्डल
पियनको मृत्यू भएपछि भोली सार्वजनिक विदाको घोषणा
डा. सिके राउतलाई पक्राउ गरी लाईसेन्स खारेज गर्नुपर्छः ईन्जिनीयर्स एशोसिएशन
जनकपुरः गहना लुटन महिलाको घाँटी रेट्ने भुट्टा चोर १० घण्टा नबित्दै पक्राउ, मँगलसुत्र बेचे
नेपाल प्रहरीको एक गोप्य पत्र लीक !
जानकी मन्दिर मडवामा ईस्लामिक झण्डा लिएर टिकटक बनाउने युवकमाथि निवेदन, प्रहरी खोज्दै
प्रदेश २ः एक वडाध्यक्ष घुस सहित रँगेहात पक्राउ